တောင်ကိုရီးယား ပြည်သူလွှတ်တော်အမတ် ဂင်ယွန်ဒေါ့(ဂ်)သည် မန္တလေးမြို့ ၌ ကျဆုံးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်း မကြယ်စင် ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့်”EVERY THING WILL BE OK” စာတန်းပါ တီရှပ်ကို..ဝတ်ဆင်၍ ပြည်သူလွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့ ဧပြီလ 19 ရက်နေ့ သည်တောင်ကိုရီးယား ၏တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်နေ့ ပါ လွှတ် တော် အမတ် ဂင်ယွန်ဒေါ့(ဂ်)သည်..
အခြား လွှတ်တော်အမတ်များကိုလည်း မကြယ်စင်၏ အကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူလူထုများ ခုခံတော်လှန်နေကြသော အခြေအနေများကို ရှင်းပြရင်း စစ်ကောင် စီ၏ မတရားသဖြင့် အကြ မ်း ဖ က် ဖြို ခွ င်းမှု ကြောင့်.. အသ တ် ခံ ရနေကြသော မြန်မာပြည်သူလုထုများအ တွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကို ထောက်ခံပေးရန် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်များထံသို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့..
တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ..တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အစိုးရဘက်ကရောပြည်သူတွေဘက်ကရော မြန်မာနိုင်ငံ တွက် အားတက်သရောကူညီပေးနေတာ….
တောငျကိုရီးယား ပွညျသူလှတျတျောအမတျ ဂငျယှနျဒေါ့(ဂျ)သညျ မန်တလေးမွို့ ၌ ကဆြုံးသှားခဲ့သော သူရဲကောငျး မကွယျစငျ ဝတျဆငျခဲ့သညျ့”EVERY THING WILL BE OK” စာတနျးပါ တီရှပျကို..ဝတျဆငျ၍ ပွညျသူလှတျတျော အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ ဒီနေ့ ဧပွီလ 19 ရကျနေ့ သညျတောငျကိုရီးယား ၏တျောလှနျရေး နှဈပတျလညျနေ့ ပါ လှတျ တျော အမတျ ဂငျယှနျဒေါ့(ဂျ)သညျ..
အခွား လှတျတျောအမတျမြားကိုလညျး မကွယျစငျ၏ အကွောငျးနှငျ့ မွနျမာပွညျသူလူထုမြား ခုခံတျောလှနျနကွေသော အခွအေနမြေားကို ရှငျးပွရငျး စဈကောငျ စီ၏ မတရားသဖွငျ့ အကွ မျး ဖ ကျ ဖွို ခှ ငျးမှု ကွောငျ့.. အသ တျ ခံ ရနကွေသော မွနျမာပွညျသူလုထုမြားအ တှကျ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရအဖှဲ့ကို ထောကျခံပေးရနျ တောငျကိုရီးယားအစိုးရနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျော အမတျမြားထံသို့ တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျတဲ့..
တကယျကို ကြေးဇူးတငျမိပါတယျ ..တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက အစိုးရဘကျကရောပွညျသူတှဘေကျကရော မွနျမာနိုငျငံ တှကျ အားတကျသရောကူညီပေးနတော….
အဆိုတော် ဟန်နေတာအပါအ၀င် အယောက် (၂၀ ) အား ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်